Ungayifinyelela kanjani inketho "yamavidiyo engiwathandayo" ku-YouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ipulatifomu ye-YouTube ifaka phakathi i- inketho esivumela ukuthi sibuke uhlu oluphelele lwawo wonke amavidiyo esiwathandile. Ukuze sikwazi ukufinyelela kulolu hlu, kufanele simane sichofoze inkinobho ethi "Amavidiyo engiwathandayo" kumenyu enkulu.
Kepha uma ungazi ukuthi ungayithola kanjani le nketho Sikumema ukuthi ufunde i-athikili elandelayo lapho sizokukhombisa igxathu negxathu okufanele ulilandele ukuze ubone uhlu lwamavidiyo owathandayo ku-akhawunti yakho ye-YouTube.
Izinyathelo zokufinyelela inketho "Amavidiyo engiwathandayo"
Abasebenzisi beplatifomu ye-YouTube bazokwazi ukufaka uhlu lwamavidiyo engiwathanda kakhulu kusuka enguqulweni yedeskithophu kanye nakuhlelo lokusebenza lwamaselula. Ezimweni zombili inqubo ilula futhi iyashesha.
Indlela 1: Kusuka kunguqulo yedeskithophu
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yimaphi amavidiyo “owathandile” ku-YouTube? Ungakwenza ngendlela elula kakhulu kusuka enguqulweni yedeskithophu yale nkundla ethandwa kakhulu yokusakaza ividiyo.
Into yokuqala okufanele siyenze finyelela kungxenyekazi ye-YouTube kusuka kukhompyutha yethu. Kumele uvule isiphequluli bese ubhala ikheli lewebhu elilandelayo www.youtube.com
Uma sesingaphakathi kwepulatifomu kufanele ngena nge-imeyili ne-password yethu. Manje sicindezela imivimbo emithathu evundlile evela engxenyeni engenhla kwesokunxele kwesikrini bese uchofoza kukhetho "Library"
Ekupheleni kwekhasi uzothola isigaba esinesihloko esithi "Amavidiyo engiwathandayo”. Lapho, uhlu oluphelele luzovela nawo wonke amavidiyo owathandile "ngaphakathi kwepulatifomu. Ukufinyelela kuhlu oluphelele kufanele uchofoze ku- "See All".
Chofoza ku- "Amavidiyo engiwathandayo"
Kunendlela elula futhi eqonde kakhulu ukufinyelela uhlu lwamavidiyo engiwathanda ngaphakathi kwe-Youtube. Lapha siyakuchazela:
chofoza ngenhla kwemivimbo emithathu evundlile (ekhoneni eliphezulu kwesokunxele)
Chofoza kunketho "Amavidiyo engiwathandayo"
Ilungile. Uzobe usuvele ulutholile uhlu lwawo wonke amavidiyo owathandile ngaphakathi kwepulatifomu.
Indlela 2: Kusuka kuhlelo lokusebenza lweselula
Abasebenzisi abavame ukungena ku-YouTube kusuka kuhlelo lokusebenza leselula bangafinyelela kuhlu lwamavidiyo athandiwe ngaphakathi kwepulatifomu. Nayi i- izinyathelo okufanele zilandelwe:
Okokuqala kufanele vula uhlelo lokusebenza lwe-Youtube kudivayisi yakho yeselula. Uma kwenzeka ungenaso isikhathi esivulekile, mane ubonise i-imeyili nephasiwedi yakho.
Ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini uzothola inketho enegama le- “Ilabhulali”. Uzodinga ukuthi uchofoze lapho ukuthola uhlu lwamavidiyo akamuva kakhulu nohlu lwadlalwayo.
Ngezansi uzothola inketho “Amavidiyo engiwathandayo”. Ukuthepha kuzovula ikhasi ngawo wonke amavidiyo we-YouTube owathandile.
1 Izinyathelo zokufinyelela inketho "Amavidiyo engiwathandayo"
2 Indlela 1: Kusuka kunguqulo yedeskithophu
3 Chofoza ku- "Amavidiyo engiwathandayo"
4 Indlela 2: Kusuka kuhlelo lokusebenza lweselula